Beirada Beira (ama Beyrac ee Somaliya) waa noocyada dabiiciga ah ee dabiiciga ah ee geeska Afrika ku yaal. Beira waa wakiilka keliya ee ku jira cirbadda lafdhabarta ee leh amarka Artiodactyla, qoyska Bovidae iyo Neotraginiae. Qaybteeda waxaa ku xaddidan buuraha, buuraha iyo gawaarida inta badan Waqooyiga Soomaaliya, iyada oo la sii wado meelo yaryar oo qaybo yar oo ku yaalla Koonfurta Jabuuti iyo Waqooyi-Bari Itoobiya.
Aragtida guud ee noocyada quruxda badani waa klipspringer-sida. Midabka lakabka jirka ee aasaasiga ah waa midab, oo leh buro guduud ah, qoorta dheer iyo madaxa. Qolfida-cad oo hoosta ku jirta waa kala duwantahay muraayad madow-caan ah oo ka soo baxaysa suxullo ilaa bowdyo. Aad u kala duwan yihiin dhagaha waaweyn. Gorgorrada waxaa laga helaa ragga kaliya.
Sida daalacashada Beiras waxay ku xiran tahay caleenta geedo kala duwan, geedo yaryar iyo geedo succulent ah. Qaab dhismeedka bulshadu waa laba-labo iyo kooxo qoys, oo difaacaya dhulalka. Beira waxay ku qoran tahay “nugul” 1996 dii ee IUCN Laanqayrta Cas ee Soomaaliya iyo Itoobiya iyo sida ugu macquulsan Jabuuti. Tobaneeyo sano ka hor, dhacdadii Beir ceelka Beira ee Jabuuti weli lama hubin.
Si kastaba ha noqotee, sanadkii 1992 ayaa la xaqiijiyay in ay dhacdey aragti, sawiro iyo muuqaal laga helay gobolka Koonfurta Jabuuti ee ku yaalla Cali-Sabieh, laakiin tirada dadweynaha iyo isbeddelka Jabuuti waa mid adag. Si kastaba ha noqotee, joogteynta iyo duruufaha aragtidu waxay soo jeedinayaan in noocyada ay dhif tahay laakiin aysan halis ugu jirin Jabuuti, ugu yaraan wakhtigaas